Akwụkwọ mmado kachasị ọhụrụ na usoro Sọpụrụ 20 na-akwalitekwa ihe nkiri X-Men: Dark Phoenix | Androidsis
Kacha ọhụrụ na-asọpụrụ 20 Series Poster Ọzọkwa na-akwalite X-Men: ọchịchịrị Phoenix Movie
La Sọpụrụ 20 usoro ka na -amalite taa na London, maka ndị nwere ike bịa chee na akagbuola ya ihe omume na nso nso a n'etiti gọọmentị US na Huawei, ụlọ ọrụ na -anabata nsọpụrụ.
N'oge na -adịbeghị anya, akaụntụ gọọmentị Sọpụrụ Weibo wepụtara akwụkwọ mmado nke na -akwadoghị ụbọchị mmalite ekwentị na London na China, kamakwa kpughere Mkpakọrịta nke mobi ndị a na ihe nkiri Marvel na-esote, nke bụ X-Men: Dark Phoenix.
Mpempe akwụkwọ mmado na -egosi nsọpụrụ 20 n'azụ, nke nwekwara ike ịbụ ụdị Pro, ebe ekwughị kpọmkwem nke ọ bụ n'ime ha abụọ. I nwekwara ike ịhụ onyonyo nke Jean Gray (nke Sophie Turner na -akpọ), agwa nke ihe nkiri Dark Phoenix lekwasịrị anya na ya. (Chọpụta: Emebere Honor 20 Lite na Spain)
Mpempe akwụkwọ ọkwa nsọpụrụ 20 na mkpakọrịta na X-Men: Dark Phoenix
Ederede dị na akwụkwọ mmado na -akwado ụbọchị mwepụta ihe nkiri a, nke bụ June 6, na mmalite ekwentị (Mee 21 na London na Mee 31 na Shanghai, China).
Post Weibo na -akwado na usoro Sọpụrụ 20 ga -enwe kamera anọ. Ọ na -ekwukwa na Sọpụrụpụrụ ga -enye ndị mmeri nwere ihu ọma tiketi iri ise iji hụ ihe nkiri ahụ. Agbanyeghị, enweghị nkọwa doro anya banyere ekwentị Sọpụrụ 50 pụrụ iche sitere na mbipụta Dark Phoenix.
Ndị a bụ ọnụahịa edozi nke Honor 20 na 20 Pro [+ Nkọwapụta]
Sọpụrụ 20 na Sọpụrụ 20 Pro abụghị naanị ga -enwe kamera anọ, mana ọzọkwa ga -abịa na processor Kirin 980, ihuenyo mebiri emebi na Ime Anwansi UI 2.1 dabere na A gam akporo 9 achịcha. Na mgbakwunye, a ga -eji bezels dị gịrịgịrị, nke dabere na ihuenyo, ga -abịa n'ọtụtụ nhọrọ nke RAM na ebe nchekwa dị n'ime, yabụ ha ga -adị na ọnụahịa dị iche iche, dabere na nke ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kacha ọhụrụ na-asọpụrụ 20 Series Poster Ọzọkwa na-akwalite X-Men: ọchịchịrị Phoenix Movie
The OPPO K3 kpamkpam leaked: imewe na atụmatụ kpughere